IMITCHELLS VS OOMATSHINI BAPHOSWA | ULUHLU OLUPHELELEYO LWABADLALI KUNYE NABADLALI - IRADIO TIMES - IIMUVI
Dibana nabalingisi beMitchells vs The Machines
IMitchells Vs.oMashini yinkqubo yaseMelika ehlekisayo ye-sci-fi evela kwi-Sony Picture animation.
Ngokukhutshwa kwayo kumdlalo weqonga ngo-Epreli 23rd kunye ne-Netflix yayo yokuqala ngo-Epreli 30, ikhokelwa nguMike Rianda kwindawo yakhe yokuqondisa okokuqala.
Umboniso bhanyabhanya ulandela ubomi bosapho olungasebenzi kakuhle olunikwe umsebenzi wokusindisa uMhlaba kwirobhothi xa usendleleni.
UKatie Mitchell ongumdlali weqonga osakhasayo usukela iholide yakhe yokugqibela kunye nosapho - abazali uRick noLinda Mitchell, kunye nomntakwabo Aaron Mitchell - ngaphambi kokuba aye eyunivesithi.
Nangona kunjalo, ifilimu ithatha i-twist xa isixhobo sakhe sobukrelekrele se-PAL sijika sibi emva kokuba usosayensi wakhe uMark Bowman angenise uluhlu olutsha lweerobhothi, esenza ukuba iPAL ibize abantu bayo bezobuchwephesha ukuba babambe abantu.
Funda yonke into ofuna ukuyazi malunga nesamente.
UAbibi Jacobson uvakalisa uKatie Mitchell
Ngubani Katie Michell? UKatie Mitchell ngumnqweno wemiboniso bhanyabhanya kwaye uyintombi okanye uRick noLinda Mitchell. Umntu oneminyaka eli-18 ubudala ngudade omdala ka-Aaron Mitchell, kwaye, ukongeza kwiifilimu unomdla kwitekhnoloji. Uphupha ngokuya kwikholeji eyokufunda ngenjongo yokuqalisa ikhondo lomsebenzi kwiimuvi.
Yintoni enye u-Abbi Jacobson akuyo? U-Abbi Jacobson udale kunye kunye ne-co-starred kwiComedy Central uthotho lweSixeko esibanzi kunye no-Ilana Glazer, esekwe kuthotho lwewebhu eligama linye. Uvele kwifilimu uMntu esiya kuBantu ejongene noMichael Cera kunye noPhillip Baker Hall, kwaye naye wadlala indima kwi-Lego Ninjano Movie njengoNya. Ukwalilizwi leNkosazana enguMbotyi eMat Groening's Disenchantment.
Iindima zikamabonakude zibandakanya isiqendu se2020 seCrb Your Inzondelelo kunye nejaji yeendwendwe kuthotho lwe10 yeRuPaul's Drag Race.
Amazwi kaDanny McBride uRick Mitchell
Ngubani uRick Mitchell? URick Mitchell ngu-deuteragonist we-Mitchells vs. oomatshini. Ungutata kaKatie noAaron Mitchell kunye nomyeni kaLinda Mitchell. URick uyayithanda indalo, ngamanye amaxesha nangaphezulu kosapho lwakhe, kwaye akayithandi itekhnoloji.
Yintoni enye uDanny McBride abe kuyo? UDanny McBride ngumdlali weqonga waseMelika, umhlekisi, umbhali, umvelisi kunye nomlawuli okhe wavela kuthotho lwe-HBO kumabonakude e-Eastbound nasezantsi, kwi-Vice Principles nakwiThe Righteous Gemstones.
Iikhredithi zokubambela ifilimu zibandakanya iNdlela yeFist Fist, iRod Hot, iPineapple Express, iTropic Thunder, Phezulu emoyeni, wena Ukuphakama, Esi sisiphelo kunye nomphambukeli: Umnqophiso.
Ukwavakalise iindima zakhe eziDelekileyo kum, kwi-Kung Fu Panda 2, kwi-Angry Birds Movie, Sausage Party nakwi-Angry Birds Movie 2.
Maya Rudolph amazwi kaLinda Mitchell
Ngubani uLinda Mitchell? U-Linda Mitchell ngumlinganiswa ophambili kwi-Mitchells vs. oomatshini. Ungumama kaKatie Mitchell noAaron Mitchell, kwaye utshatile noRick Mitchell.
Yintoni enye uMaya Rudolph akuyo? Emva kwekhondo lomculo uMaya Rudolph wajoyina isandi soMgqibelo ebusuku ngo-2000 kwaye wabonakala de kwaba ngu-2007, esenza ukubonakala okuninzi. Ubonakalise usekela-Mongameli wase-US u-Kamala Harris ukusukela kwinkulumbuso ye-45th series kwi-2019. Uphumelele indima yakhe yokuqala ebonakalayo kwifilimu ngo-2006 kunye ne-Prairie Home Companion.
Uye wadlala kunye noLuka Wilson kumdlalo weqonga we-sci-fi Idiocracy, eneendwendwe ezinjengoRapunzel eShrek weSithathu. Ezinye izinto ezibonwayo zibandakanya uKath & Kim we-NBC, kunye neefilimu ezikude esiya kuzo, ezikhulileyo, iiNtombi ezitshatileyo, iNdlela, indlela ebuyayo.
UMike Rianda uvakalisa uAaron Mitchell
Ngubani uAaron Mitchell? U-Aaron Mitchell ngumlinganiswa ophambili kwiMitchells vs. oomatshini. Ungubhuti omncinci oneminyaka emithandathu ubudala kaKatie Mitchell. Ungunyana kaRick noLinda Mitchell.
Yintoni enye anayo uMike Rianda? UMike Rianda nguMitchells vs. Umlawuli 'kunye nombhali-mbhali. Uvakalise nenxalenye ka-Lee Thompson kuthotho lwee-TV iGravity Falls.
U-Eric Andre uvakala njengoGqirha Mark Bowman
Ngubani uGqirha Mark Bowman? UGqr.Mark Bowman sisazinzulu esikwi-CEO kunye nomseki weeLebhu ze-PAL, ogama indalo yezobuchwepheshe iphulukene nolawulo. Kwiwebhusayithi yeeLebhu zePAL, uthi: Ixesha elidlulileyo lilungile. Ikamva liza kukhanya ngakumbi.
Yintoni enye u-Eric Andre akuyo? U-Eric Andre waziwa kakhulu njengomdali, umgcini kunye nombhali-mbhali kumdlalo wokudada wabantu abadala u-Eric Andre Show. WayenguMarko kuthotho lwe-FXX Indoda eKhangela uMfazi kwaye yavakalisa u-Azizi kwi-2019 remake ye-The King King.
U-Olivia Colman uvakala nge-PAL: umncedisi onyanisekileyo
UGeorge Pimentel / WireImage
NGAPHAKATHI Ngaba iPAL? I-PAL yeyona nto iphikisayo kwi-Mitchells vs The Machines. Ungumncedisi obonakalayo kwaye uthatha imo ye-smartphone emnyama enobuso obumhlophe kwiscreen esiblowu. Uyinkokeli yovukelo lobuchwephesha.
Yintoni enye u-Olivia Colman abe kuyo? Umlingisi oliNgesi uOlivia Colman unoluhlu olubanzi lweekhredithi zikamabonakude nakwifilimu, kwaye uphumelele amabhaso amaninzi ukusuka kwii-Oscars ukuya kwii-BAFTAs nakwiGlobal Globes kwii-Screen Actors Guild Awards. Indima yakhe yokuphumelela yayikuChannel 4 Sitcom Peep Show, kunye nezinye iindima ezihlekisayo ezibandakanya iGreenwing, That Mitchell kunye neWebb Jonga, Abantu abahle, kunye neFleabag phakathi kwabanye.
Uyaziwa ngokusebenza kwakhe kumdlalo weqonga wolwaphulo-mthetho kwi-ITV kwaye wabonisa uKumkanikazi uElizabeth II kwisigaba seNetflix Umqhele. Ezinye iindima zefilimu zibandakanya i-Hot Fuzz, i-Lady iron, i-Hyde Park e-Hudson, ukubulala kwi-Express Express, iTyrannosaur, eyintandokazi, u-Bawo kunye neNtombi elahlekileyo.
Amazwi kaFred Armisen uDeborahbot 5000
Ngubani uDeborahbot 5000? I-Deborahbot 5000 yirobhothi eyaphukileyo evela kwiiLebhu ze-PAL onesiphene ngexesha lovukelo lobuchwephesha kwibhidi yokunceda iMitchells.
Yintoni enye anayo uFred Armisen? Umdlali weqonga waseMelika, umhlekisi, umbhali, umvelisi kunye nemvumi, uFred Armisen waziwa kakhulu njengelungu leSatifikethi soMgqibelo ebusuku ukusuka ngo-2002 ukuya ku-2013. Ebekwiifilimu ezininzi ezihlekisayo ezibandakanya i-EuroTrip, Anchorman kunye neCop Out.
Kunye neqabane lakhe elihlekisayo uCarrie Brownstein, u-Armisen odalwe waba ngumlingani kunye nomlingisi odlalwe kumdlalo weqonga we-IFC wasePortlandia. Unenxalenye kuluhlu olude lweefilimu kubandakanya Zonke ngoku ngoku, iLego Ninjago Movie kunye neZoolander 2 phakathi kwabanye abaninzi.
U-Beck Bennett u-Eric
Ngubani uEric? U-Eric ukwarobhothi owonakeleyo ovela kwiPal Labs onesiphene ukunceda iMitchells.
Yintoni enye u-Beck Bennett akuyo? U-Beck Bennett, igama elipheleleyo uChristopher Beck Bennett, ulilungu elikhoyo ngoku ngoMgqibelo ebusuku. Kwelase Melika wayesaziwa nge ntengiso ze TV ze AT & T ezithi ‘Ayingxaki’ apho wenza udliwanondlebe nabantwana. Uyaziwa ngokuzoba iividiyo kunye neqela elihlekisayo loMmelwane Olungileyo kunye nomdlalo wakhe weYouTube obonisa Ithiyetha yoBomi.
Unamakhredithi kwiifilimu uBill & Ted Jongana noMculo, iiAngry Birds Movie 2 kunye neZoolander 2 phakathi kwabanye.
Amazwi kaConan O'Brien uGlaxxon 5000
Ngubani uGlaxxon 5000? I-Glaxxon 5000 yirobhothi engendawo evela kwiilebhu ze-PAL emiswe ekufikeleleni kumandla akhe apheleleyo obusathana ngoguqulelo olubi oluvela kuKatie noRick Mitchell we-T. kunye noRihanna betha uBomi baKho ngokuPhila.
Yeyiphi enye into ebekuyo uConan O'Brien? UConan O'Brien waziwa kakhulu njengomamkeli-ntetho wexesha lasebusuku eMelika. Uye wakhokela uConan kwi-cable channel ye-TBS ukusukela ngo-2010. Usebenze kwiqela lokubhala le-Saturday Night Live kunye ne-The Simpsons.
Uvele njengaye kwiifilimu ezininzi kubandakanya iLego Batman Movie, Ubomi obufihlakeleyo bukaWalter Mitty, ngoku uyandibona kwaye ubonwa phakathi kwabanye.
U-O'Brien unoluhlu olude lweekhredithi zokubonakala kumabonakude egameni lakhe kubandakanya njengomphathi weeMbasa zeEmmy, iiMbasa zoMculo zeMTV, nakwimiboniso ethi Ndadibana Njani noMama Wakho, uPhuhliso oluBanjiweyo, iNashville, oonombombiya baseMadagascar naseSilicon Valley.
UCharlyne Yi u-Abby Posey
Ngubani uAbby Posey? UAbby Posey uhlala kufutshane neMitchells kunye nabazali uJim noHailey Posey. Ngumdla wothando luka-Aaron Mitchell.
Yintoni enye anayo uCharlyne Yi? UCharlyne Yi waziwa ngendima yakhe njengoGqirha Chi Park kwidrama yezonyango yaseFox kunye nelizwi likaRuby kuthotho lweCartoon Network uSteven Universe. Ukwavakalise iChloe Park kwii-We Bare Bears kwaye lilizwi lika-Alice kwi-Summer Camp Island.
Amazwi kaChrissy Teigen Hailey Posey
Ngubani uHailey Posey? U-Hailey Posey ngumfazi kaJim Posey kwaye uhlala kufutshane neMitchells.
Yintoni enye iChrissy Teigen ekuyo? UChrissy Teigen, otshatele kwi-Mitchells vs. The Machines co-star John Legend, uyaziwa ngokusingathwa kukhuphiswano lomculo bonisa iLip Sync Idabi kunye no-LL Cool J. Ukwangumgwebi kumdlalo wehlaya wase-US.
Waqala ikhondo lakhe lomsebenzi njengemodeli ebonakala kuhlobo lwase-US lwe-Deal okanye i-No Deal njengemodeli yebhegi ngaphambi kokuba aqhubeke nokuvela kwi-America's Next Top Model. Wayebambisene naye kwi-US yemihla ngemihla yendlela yokuphila yokuthetha ibonisa FABLife.
Amazwi kaJohn Legend uJim Posey
Ngubani uJim Posey? UJim Posey ngummelwane weMitchells. Utshatile noHailey Posey kwaye nguyise ka-Abby.
Yintoni enye ebekuyo uJohn Legend? UJohn Legend, otshatele kwiMitchells vs.Iinkampani ezisebenza kunye nooMatshini uChrissy Teigen, unomsebenzi ophumeleleyo kwezomculo njengemvumi, umbhali wengoma kunye nomvelisi werekhodi kodwa uye wavela nakwimiboniso bhanyabhanya emikhulu nemincinci.
Uvakalise indima yeCrow kwi2017 movie Crow: The Legend kwaye unamakhadi asebenzayo eLa La Land, eJingle Jangle nakwisitrato iSesame: Elmo Uyakuthanda! UJohn uvele njengaye kwimidlalo kamabonakude kubandakanya i -Simpsons, uthotho lwaseMelika lweLizwi, iLip Sync Idabi, Ukudanisa ngeeNkwenkwezi kunye nokuNqanda intshisakalo yakho phakathi kwabanye.
isivumelwano somnandi somhla uk
iimfazwe zeenkwenkwezi ngokulandelelana kwazo
oshiye ngokungqongqo ukuza kudanisa kwiveki ephelileyo
I-tyson fury vs schwarz bukhoma kumjelo
ifomula 1 ijelo amaxesha 4
iphi indawo enkulu yokubhaka yaseBritane
uthotho olulahlekileyo 1 cast